8 Qalad Oo Raga Sameeyaan Marki Lagu Jiro Galmada. - iftineducation.com
8 Qalad Oo Raga Sameeyaan Marki Lagu Jiro Galmada.
aadan21 / June 10, 2016
iftineducation.com – Ha U Qaadan In Aad Tahay Qaamuus: Ha isu maleyn adiga oo tix raacaya dhowr guur ama aqriska buugaagta iyo bogaga ka hadla aqoona sariirta in aad ku noqoneyso xariif ku xeel dheereeya xariirka nolosha sariirta oo ku xeel dheer qaabka
l -kiciyo dareenka haweeneyda ogoow wax haweeney kicinaya dareenkeeda raaxana u ah in mid kale uusan u aheyn , qurbo magazine waxa ay ku leedahay isku day in aad wax badan ka ogaatid waxa munaasibka ku ah lamaantaada.
2– Xariirkaada Galmo Kama baxsana Noloshaada Maalin Laha Ah : Rag badan ayaa kala sara xariirka sariirta iyo dhibaatooyinka maalmeed ee guriga , balse macal asaf haweeneyda kalama saarto waxa maalintii ka qabsada guriga oo dhibaato ah iyo xariirkaada balse ninyahoow aan xariirfka aheyn ee dhuglaawaha isku day in dhamaadka maalintaada ee lamaantaada ahaato mid wanaagsan oo jilicsan si ciyaar macaan aad u heshid.
3– Xariirka Sariirta Malaha Da`da Howl Gabka: ma jiro wax la yiraahdo da`da weyn ee aan looga hadlin ciyaarta sariirta nin iyo naagba labadaba waxa ay awoodaan in macaan ay ugu raaxeystaan ciyarta bilaa xuduud , kaliya jadwalka cunadaada daji oo cunno caafimaad leh qaado waa hubaal haddii alle kuu qoro adoo 81-sano jir ah ayaad caruur hor leh aabo u noqon kartaa.
4– Jawiga Qaboow Uma Fiicna Ciyaarta: dad badan ayaa aaminsan in heerka heerka kulka guriga ee qaboow uu gacan kageysto xaraarada ciyaarta sariirta balse bil caksi heerka darajada diirnaanta ayaa ah midda ugu fiican oo wax ay dhiiga gacan ka siineysaa in si wacan uu ugu soo shumbo xubnaha taranka taasi oo kuleel u yeeleysa ciyaarta .
5– Ciyaarta Ma Fiicna Habeenkii : ma og tahay in hormone-ka Aldosterone ee jirkaada ku jiro uu saro u kacayo %40 aroortii iyo marka qoraxda dhaceyso ee habeenkii sida darteed waqti cayimin ha u sameyn ciyaarta kaliya habeen ha ku ekaan ee aroortii iyana xaraarad ayay leedahay .
6– Ma Jirto Wax Bar-bar Dhigid Ah:ha isku dayin in lamaantaada la bar bar dhigto kulan sariireed horay aad u soo sameeysay sida aan horay u soo sheegnay haweeney waliba midda kale waa kaga duwam tahay sariirta .
7– Jimicsiga Iyo Ciyaarta Sariirta:ragga badan ayaa aamisan in ciyaarta ay saameyn ku yeelato heerkooda galmo isla markaana ka yeeleyso mid daalan balse bil caksi kulanka sariirta ayay ka yeeshaa mid wanaagsan , jimicsiga inta lagu jiro jirka waxa uu soo daayaa hormone-ka farxadda kaasi oo wanaajiya habka kulanka sariirta.
8– Hal Jeer Ayay Fiican Tahay Galmada Si Awooda Galmada Loo Ilaalyo: ragga badan ayaa aamisan gaar ahaan dadka ku cusub guurka in hal mar kaliya kul filan tahay maalintii sameynta ciyaarta si loo ilaaliyo awoodda galmada balse taasi waa qalad ma jirto xad ay leedahay kaliya waxa ay ku xeran tahay awoodda jirka iyo caafimaadka labadiina
GALMADA nuucaan ah Rag & Dumarba raaxo waali ah ayeey ka helaan
Maxamed Cali Kalaay oo lagu aasay Magaaladii uu ku dhashay ee Louisville (Daawo Sawirada)..